War ဖြင့် ဇာတ်ကား97 ကား
mmbusticket1080p BluRay 5.1 DTS Quality ဖြင့် Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုပေါင်းတင်ဆက်ပါသည်။MCU ဇာတ်ကားအားလုံးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မှာ Download နိုင်ပါသည်။++++++++++++++++++++++++++++
Marvel Cinematic Universe Intro=======================
Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။
အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။
ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး
ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, Vision,Scarlet Witch,Antman,Falcon) တို့နဲ့
Spiderman, Doctor Strange, Black Panther, Guardians of the Galaxy အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတားဆီးကြရင်း ဖြစ်လာတဲ့ စစ်ပွဲပါ။Infinity Stones6လုံးရဲ့ တည်နေရာတွေကတော့၁. Space Stone aka Tesseract (Blue)
(Captain America: the first avenger ဇာတ်ကားမှာ နာဇီတွေဆီက လုယူရတဲ့ ကျောက်တုံးဖြစ်ပြီး
Avengers ဇာတ်ကားမှာ လိုကီက ဂြိုလ်သားတွေကို ကမ္ဘာကိုခေါ်ဖို့ ဝင်ပေါက်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်၊
လက်ရှိကတော့ Asgard ဂြိုလ်ပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းခဲ့ရင်း Thor: Ragnarok ကားအဆုံးမှာ လိုကီ ခိုးယူခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ)၂။ Reality Stone aka Aether (Red)
( စကြဝဠာကို Big Bang မတိုင်ခင်အထိတောင် ပြန်ပြောင်းပစ်နိုင်ပါတယ်။
Thor 2: The Dark World မှာ ပါလာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး credit scene မှာ Collector ဆိုသူဆီမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်)၃။ Power Stone (Purple Orb)
( ဂြိုလ်တစ်ခုလုံးကို အသာလေးဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့ raw power တွေပါပါတယ်။
Guardian of the Galaxy 1 မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Xander က Nova Corps စစ်တပ်လက်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။)၄။ The Time Stone ( The Eye of Agomotto, Green)
( အချိန်ကို လိုသလိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ Doctor Starnge ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်လာပြီး လက်ရှိ ဒေါက်တာ စထ်ရိန့်က စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်)၅။ Mind Stone (Yellow)
( ဉာဏ်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ညို့ခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Avengers 1 မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ Vision ရဲ့ နဖူးထဲမှာ မြှပ်ထားတာပါ)၆။ Soul Stone (Orange)
( သက်ရှိ သက်မဲ့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ Planet Vormir မှာရှိပါတယ်။ )အဆိုပါ ကျောက်တုံး ၆ တုံးကို သုံးနိုင်ဖို့ Infinity Gauntlet ဆိုတဲ့ လက်အိတ်ကို လိုပါတယ်။ အဲဒီလက်အိတ်ကိုတော့ Thanos ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို Marvel Universe ကိုကြည့်ဖို့ အကြမ်းဖျဉ်းလုံလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် ဟာ လုပ်တက် ကိုင်တက်တယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ထဲနဲ့ သူဌေး ဖြစ်သွားနိုင်သလို အမှားအယွင်းဖြစ်ရင်လဲ တစ်ရက်ထဲနဲ့ ခွေးဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲ… အဲ့ဒီမှာ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်ထဲ နာမည်ကောင်းနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ရိုးသားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ် စေတနာ သန့်တယ် ကတ်စတန်မာ ကို ကိုယ့်မိသားစုလို သဘောထားတက်တယ် ဘယ်တော့မှ ဂျင်း မထည့်တက်ဘူး ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံတဲ့ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ပွဲစားလူငယ်လေးပေါ့… ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ အဖေ ရဲ့ ဆေးရုံ စရိတ်တွေ အကြွေးတွေ လည်ပင်းနစ်လာတာကြောင့် သူဟာ မူလ နာမည်ရှိပြီး တိုးတက်မှု နှေးတဲ့ လုပ်ငန်းက ထွက်လိုက်ပြီး Top 10 List ထဲ ဝင်နေတဲ့ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုမှာ အလုပ်သွားလျှောက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီ လုပ်ငန်းကတော့ အမြတ် မတရားများတယ် ရောင်းမထွက် ငှားမစွံတဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေကို ရောင်းထွက်အောင် ငှားထွက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ခံစားခွင့်က ဘာနဲ့မှ မတူအောင် ချက်ချင်းကြီးပွားနိုင်တယ်… ဒီလိုနဲ့ အဖြူထည်လေးမှာ အရောင်တွေ စွန်းပြီး အိမ်ခြံမြေ ရှာနေတဲ့ မိသားစုတွေ ကို ဂျင်းလိုက် ပတ်ထည့်တော့တာပါပဲ…. သူဂျင်းထည့်လိုက်တာကတော့ ဘယ်သူမှ မနေရဲပဲ လူတွေ ခဏခဏ သေတဲ့ အပ မှီနေတဲ့ တိုက်ခန်း အိမ်ရာတွေ ဖြစ်နေခဲ့သော် အခါ….
2017 မှာထွက်မယ့် Justice League ရုပ်ရှင်အတွက် မေးခွန်းတွေ စိတ်ထဲမှာ များနေတယ်ဆိုရင် ဒီဟာလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ rating 7.3 ရထားပြီး အတော်လေးကောင်းတဲ့ animation ပါပဲ။ Batman နဲ့ GL တွေ့ဆုံခန်း၊ Cyborg ဖြစ်လာပုံ နဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မပါသေးမယ့် Shzam ကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဗီလိန်ကလည်း Darkseid ဖြစ်ပြီး Parademon တွေပါတာမို့ အားလုံး ရင်းနှီးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် စူပါဟီးရိုးဖန်တွေတိုင်း အမှတ်တရဖြစ်ကျန်ခဲ့မယ် Darkseid ကို JL အကုန်ပေါင်းဆော်တဲ့ epic fighting scene လည်း ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
Main characterက ပတ်မီဂျောင်ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာပါ ၊
စာချုပ်ချုပ်မယ့်အေဂျင်စီဘက်ကနေသရဲကားရိုက်ဖို့ အဆောတလျှင် ဇာတ်လမ်းတောင်းလာရာကနေအစပြုလို့
လဝက်အတွင်း သူမရဲ့သရဲကားအတွက် ကုန်ကြမ်းရှာဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ…
ဂျူနီယာတစ်ယောက်ဆီကနေ သရဲရိုက်တဲ့သရဲကားဆိုတဲ့ ထူးထူးခြားခြားရုပ်ရှင်အကြောင်း အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြားခဲ့တယ် ၊
အလုပ်အတွက်အရေးတကြီးလိုတာကြောင့်ရော သိချင်စိတ်ကြောင့်ရော အစဆွဲထုတ်မိတဲ့ ကြည့်ရှု့ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ အဲ့ရုပ်ရှင်ကနေ ဘယ်လိုထိတ်လန့်စရာတွေ တွေ့ကြုံလာရမလဲ…
Ong Bak Muay Thai Warrior 2003
ဒီတစ်ခါတော့ တရုတ်ကွန်ဖူးသိုင်းကားအများကြီးရှိတဲ့ အထဲမှာ မင်းသားများစွာပြောင်းလဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကွန်ဖူးသိုင်းသမား ဝမ်ဖေးဟုန်ရဲ့ worriors of the nation ဇာတ်ကားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ် မျိုးချစ်စိတ်၊နိုင်ငံချစ်စိတ်ကို နိုးဆွပေးတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဆိုရင်လည်း မမှားပေဘူး ၁၉၀၇ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက တရုတ်အရှေ့ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အစတည်ရာက တစ်စတစ်စ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသိမ်ပိုက်ဖို့ အတွက်Planကြီးဆွဲထားခဲ့တယ် အဲ့အချိန် ဘုရင်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ကွမ်ကျိုးကို ရောက်လာတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကို ကယ်တင်ချင်တဲ စစ်သေနာပတိ ကျန်းကျိတုန်းနဲ့ ဝမ်ဖေးဟုန်တို့ ပေါင်းမိသောအခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့…
Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker 2019
စတားဝေါရ်စ် ၁၁ ကားမြောက် ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ the rise of Skywalker လာပါပြီ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ကြယ်စင်စုကြီးတွေဆီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ အင်ပါယာပါပတင်းရဲ့အသံကို ပြန်ကြားလာရပါတယ်။ကြယ်စင်စုတွေအားလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး လက်စားချေမယ်လို့ ကြေညာလိုက်သံကြီးပါပဲ။(မကြေညာဘဲ အလစ်ဝင်တိုက်ရင် သေချာပေါက်နိုင်မှာပေမယ့်ဘာလို့ ကြေညာလဲတော့ မသိပါဘူး)ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်လေယာဟာ ဒီကိစ္စကို လိုက်စုံစမ်းဖို့အထူးတပ်သားတွေကို စေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ရေး ကတော့ ဂျဒိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့လေ့ကျင့်နေဆဲပါပဲ။ဖက်စ်အော်ဒါရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ကိုင်လိုရမ်ကတော့ အင်ပါယာ ပါပတင်းကိုသတ်ပြီးအာဏာကို အခိုင်အမာ ရယူဖို့ လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ Little Neo ဖြစ်ပြီးThit San Khant မှ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
Raja Natwarlal(2014)ဒီRraja Natwarlalဇာတ်ကားလေးကတော့ 2014ခုနှစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ IMDB rating 6.1 ရ ရှိထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။Crime Thriller ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဇာမ်းလမ်းဇာတ်အိမ် တော်တော်ကောင်းပါတယ်… ရာဂျာဟာဂိမ်းကစားပြီးငွေရှာတာဝါသနာပါတဲ့သူဖြစ်ပြီး လောင်းကစားသမားအများစုကြုံလေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ငွေက အမြဲပြတ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အစ်ကိုရာဂဗ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပိုက်ဆံရဖို့ဂွင်အကြီးကြီးရိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့ဂွင်သွားရိုက်မိတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်နေမလဲ?သူလိုချင်တဲ့ပိုက်ဆံရောရနိုင်ပါ့မလား?Thriller အမျိုးအစားကြိုက်သူတွေအတွက်လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း
Awarapan(2007)ဒီAwarapan 2007ဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDB rating 7.2/10ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Action, Drama, Romance ဇာတ်ကား အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဂန်းစတားတစ်ယောက်…သူ့ဘဝမှာ သစ္စာတရားဆိုတာကိုလက်ကိုင်ထားပြီးဂန်းစတားအဖွဲ့တစ်ခုဆီမှာလုပ်တယ်…ကိစ္စတော်တော်များများဟာ သူ့ရဲ့လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်တွေကြောင့်အောင်မြင်တယ်…ဂန်းစတားခေါင်းဆောင်ကလည်း သူ့ကိုအားကိုးတယ်…တစ်နေ့တော့ သူ့ကို လူကုန်ကူးခံရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသတ်ဖို့အမိန့်ပေးခြင်းခံရပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သတ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမိန့်က အမိန့်ပဲမဟုတ်လား….ဒီလုပ်ရပ်ကို သူမနှစ်မြို့ပေမယ့်လည်း သူသတ်ဖြတ်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်…သို့ပေမယ်… ဒီမိန်းကလေးအပေါ်မှာ သနားဂရုဏာသက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှ မထင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါတော့တယ်…သူ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင့် ဂန်းစတားအဖွဲ့က သူ့ကို ဘယ်လို အဆုံးသတ်ပေးမလဲ..သူချစ်ခင်သွားတဲ့ကောင်မလေးကရော ဘယ်သူဖြစ်မလဲ…အန္တရယ်များလွန်းလှတဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းကိုရော သူဖြတ်ကျော်နိုင်ပါ့မလား…..အက်ရှင် ဇာတ်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း…
အရမ်းကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ Spy Angent နှစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ….မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး ဘယ်လိုအပြိုင်ပိုးကြမယ်..ဘယ်လိုတွေ Spy လုပ်ကြမလဲဆိုတာ..ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဟာသအက်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ IMDB Ratings: 6.3/10 အထိရရှိထားပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။Reese Witherspoon ၊ Chris Pine ၊ Tom Hardy တို့လို နာမည်ကြီးမင်းသား မင်းသမီးတွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Marvel Cinematic Universe Intro ======================= Marvel ထုတ်လုပ်ရေးမှ Marvel Cinematic Universe(MCU) ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Iron Man-1 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Endgame (2019) ဖြစ်ပါတယ်။Marvel Universe မှာ Infinity Stone လို့ ခေါ်တဲ့ စွမ်းအား အကြီးဆုံး ကျောက်တုံး(၆) လုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ စကြဝဠာအနှံ့မှာ ပြန့်ကျဲနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးချင်းစီမှာ သီးခြားအစွမ်းတွေ ရှိပြီး သာမာန်လူတွေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ Infinity War ရဲ့ အဓိက ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Mad titan လို့ခေါ်ကြတဲ့ Thanos က ဒီကျောက်တုံးတွေကို စုစည်းပြီး စကြဝဠာကို သူ့သဘောအတိုင်းဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Avengers( Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, Vision,Scarlet Witch,Antman,Falcon) တို့နဲ့ Spiderman, Doctor Strange, Black Panther, Guardians of the Galaxy အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတားဆီးကြရင်း ဖြစ်လာတဲ့ စစ်ပွဲပါ။Infinity Stones6လုံးရဲ့ တည်နေရာတွေကတော့၁. Space Stone aka Tesseract (Blue) (Captain America: the first avenger ဇာတ်ကားမှာ နာဇီတွေဆီက လုယူရတဲ့ ကျောက်တုံးဖြစ်ပြီး Avengers ဇာတ်ကားမှာ လိုကီက ဂြိုလ်သားတွေကို ကမ္ဘာကိုခေါ်ဖို့ ဝင်ပေါက်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်၊ လက်ရှိကတော့ Asgard ဂြိုလ်ပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းခဲ့ရင်း Thor: Ragnarok ကားအဆုံးမှာ လိုကီ ခိုးယူခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ)၂။ Reality Stone aka Aether (Red) ( စကြဝဠာကို Big Bang မတိုင်ခင်အထိတောင် ပြန်ပြောင်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ Thor 2: The Dark World မှာ ပါလာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး credit scene မှာ Collector ဆိုသူဆီမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်)၃။ Power Stone (Purple Orb) ( ဂြိုလ်တစ်ခုလုံးကို အသာလေးဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့ raw power တွေပါပါတယ်။ Guardian of the Galaxy 1 မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Xander က Nova Corps စစ်တပ်လက်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။)၄။ The Time Stone ( The Eye of Agomotto, Green) ( အချိန်ကို လိုသလိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ Doctor Starnge ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်လာပြီး လက်ရှိ ဒေါက်တာ စထ်ရိန့်က စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်)၅။ Mind Stone (Yellow) ( ဉာဏ်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ညို့ခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Avengers 1 မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ Vision ရဲ့ နဖူးထဲမှာ မြှပ်ထားတာပါ)၆။ Soul Stone (Orange) ( သက်ရှိ သက်မဲ့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ Planet Vormir မှာရှိပါတယ်။ )အဆိုပါ ကျောက်တုံး ၆ တုံးကို သုံးနိုင်ဖို့ Infinity Gauntlet ဆိုတဲ့ လက်အိတ်ကို လိုပါတယ်။ အဲဒီလက်အိတ်ကိုတော့ Thanos ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို Marvel Universe ကိုကြည့်ဖို့ အကြမ်းဖျဉ်းလုံလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
Great Warrior (Magadheera) 
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပေါ့နှစ် ၄၀၀ ရာခန့်က ဘဝတွေရဲ့ အချစ်ရမ္မက်က ယနေ့ဘဝထိ ဆွဲခေါ်ငင်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုဘယ်ပုံနည်းနဲ့ အဆုံးသတ်စေခဲ့သလဲဆိုတာကိုရင်မောဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကားကောင်းလေးပါ (ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း) ဟာရှာ ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာဆိုင်ကယ်စတန့် သမားတစ်ယောက်ပေါ့ ဆယ်ပေလောက် အမြင့်ဘားတန်းကို ကျော်ဖြတ်ကာ စွန့်စားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပါ တစ်နေ့မှာတော့ဘန်ကောက်ပြိုင်ပွဲသွားရန်အတွက် လေဆိပ်ကို ကားငှါးစီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီ အချိန်မှာ မိုးကလည်းသည်းလို့။သူဟာ ကားဘေးဆီမှ လက်ဆန့်ထုတ်ပြီး မိုးရေစက်တွေကို ထိတွေ့လို့နေခဲ့ပါတယ်တစ်နေရာအရောက်မှာတာ့ သူ့လက်ကိုလျှပ်စီးထိသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဟာရှာ အတွက်တော့ ဒါဟာအတိတ်ဘဝဆီ ပြန်တွေးစေခဲ့တဲ့ နိမိတ်ပါ သူ့ကိုလျှပ်စစ်စီးသလိုဖြစ်စေခဲ့တာကလည်းကောင်မလေးတစ်ယာက်ရဲ့လက်နဲ့ ထိတွေ့မိမှုကြောင့်ပါဒါကို ဟာရှာ သိခဲ့တာကြောင့် အဲဒီကောင်မလေးကိုကားမှတ်တိုင်မှာပြန်ရှာဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဲဒီကောင်မလေးနာမည်က အင်ဒီရာ တဲ့သူမရဲ့အဖေနဲ့ ဦးလေး ကတော့ အမွေ ကိစ္စနဲ့ အမှုရင်ဆိုင်နေကြရတယ် သူ့ဦးလေးမှာသားတစ်ယောက်ရှိ၍ နာမည် ကတော့ ဒါရာဂူးဗားဒါရာဂူးဗား ဟာ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးမိမိလိုချင်သည့်အရာအား မည့်သည့်နည်းနဲ့မဆို ရယူလေ့ရှိသည်။တစ်နေ့မှာတော့ ဒါရာဂူးဗား ဟာ အင်ဒီရာ ကိုတွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်မိသွားတော့တယ် အဲဒီချိန်မှာတော့ဒါရာဂူးဗားဟာ အင်ဒီရာကို ရရှိဖို့ ကြိုးပမ်းပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့ဒါရာဂူးဗားဟာ အင်ဒီရာကို အသားတောင် ထိမရပါဘူးလူတစ်ဦးက ဓားနဲ့ ဟန့်သလိုလို ခံစားခဲ့ရတယ်အဲဒီနောက် ဒါရာဟာ မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင် ဂိုရာဆီ သွား၍သူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ဖြေရှင်းခိုင်းရာမှ သူ၏ အတိတ် နှစ် ၄၀၀ ဘဝကို မှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ သူဟာ စုံစမ်းရင်း သူ၏ အတိတ်ရန်သူကားဟာရှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်။ထို့နောက်မှာတော့ ????ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ အချစ် အလွမ်း အကြမ်း အရမ်းသာမကသူငယ်ချင်းကောင်းစိတ်ဓာတ် မင်းကောင်း မင်းမြတ်တွေရဲ့ကတိသစ္စာကိုလည်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟာရှာဟာ အင်ဒီရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်လောအင်ဒီရာ ဟာရှာ ဒါရာဂူးဗား တို့ရဲ့ အတိတ်ကလဲ့စားတို့ကရောပစ္စုပ္ပန် ရဲ့ ကစားလဲ့ချေခြင်းတို့ကရော မည်သို့ အဆုံးသတ်မည်နည်းဟာရှာ ကို သတ်ဖို့ကြိုးစားသော ဒါရာရဲ့ အကြံအစည်တို့ကရောအောင်မြင်ခဲ့မည်လော ဟာရှာ ကရော အတိတ်ရဲ့ကလဲ့စားကို မည့်သို့ အဆုံးသတ်မည်နည်း အင်ဒီရာကရော အတိတ်ကို သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့မည်လော စသောမေးခွန်းများစွာနှင့် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။
Mulan II The Final War (2004)
မူလန် ၂ တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေ အတွက်လာပါပြီ။ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ မူလန် နဲ့ ရှန်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် လျို့ဝှက် တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါကြုံတွေ့ရမဲ့ စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းပါ။အားပေးကြပါဦး။
ဒီနေ့ အတွက်တော့ အတိုက် အခိုက်၊ အပစ်အခတ်နဲ့ ခပ်သွက် သွက် အက်ရှင်ကားကြည့် ပရိ သတ်အတွက် တရုတ်အက်ရှင် ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အထူး ရဲတပ်ဖွဲ့က တပ်ကြပ် ကြီး လန်ဖန် ဟာ လက်ဖြောင့်သေနတ် သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်ရက် မှာ သူတို့ တပ်ဖွဲ့တရားမဝင် ဘိန်း ထုတ်တဲ့ စက်ရုံကို ဝင်ရောက်နှိမ်နင်းရင်း ဘိန်းရာဇာ တစ်ယောက် နဲ့ ထိပ်တိုက် ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘိန်းရာဇာက ဓားစာခံ တစ်ယောက်ကို အကာအကွယ် ယူရင်း အထူးတပ် ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကို သေနတ် နဲ့ ပစ်ခဲ့တာကြောင့် လန်ဖန် က အထက် အမိန့် ကို မစောင့်ဘဲ ကိုယ့် သဘော နဲ့ ကိုယ် ဘိန်းရာဇာကို သေနတ်မှန်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမိန့် မနာခံမှု နဲ့ လန်ဖန် တစ်ယောက် အထူးရဲ တပ်ဖွဲ့က အ ထုတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် တပ်စုမှူးလုံ ရှောင်ယွမ် က လန်ဖန် ရဲ့ လုပ်ရည် ကိုင်ရည် ကို သဘောကျတာ ကြောင့် “War Wolf” လို့ခေါ်တဲ့ ပထမအဆင့် အထူးတပ်ဖွဲ့ကို ခေါ် ယူခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ အထူးရဲ အဖွဲ့ဟာ တရုတ် သူဌေးကြီး မင်းဒန် ကို လူကုန်ကူးမှု၊ လက်နက် လက်ဝယ်ထားမှု စတဲ့ အမှုတွေ နဲ့ သူ့အိမ်ကို အဖွဲ့လိုက်ဝင်ဖမ်းတဲ့ အခါ သူကလည်း ခေသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ကြေးစားသေနတ် သမားတွေကို အဖွဲ့လိုက်ငှားထား တာမို့ သူဌေးကြီးကို လာဖမ်းတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေကို ကြေးစားအဖွဲ့ တွေက မသေမချင်း ဘက်ပေါင်း စုံကနေ ပြန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူဌေးကြီး မင်းဒန်ကလည်း လန်ဖန် ရဲ့ သေနတ်ကျည်ကြောင့် သူ့ညီသေခဲ့ရတာမို့ မခဲမကျေဖြစ် ပြီး လန်ဖန် ကို လက်စားပြန်ချေဖို့အတွက် ကြေးစား လူသတ်သမား အမေရိကန်ရေတပ် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တော်မ်ကက် ကို ငှားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့သစ်ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ လန်ဖန် ဟာ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစား နေထိုင်ပြီး တိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ တော်မ်ကက် နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတော့တယ်။ဘိန်းရာဇာ ရဲ့ ကိုယ်စား လန်ဖန်ကို အသေတိုက်မယ့် ကြေးစားအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ လန်ဖန်ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
War for the Planet of the Apes (2017) ========================================= မြောက်ပိုင်းကစစ်တပ်​ရောက်လာပြီး ဆီဇာတို့ အဖွဲ့ကို​​ ​တောထဲမှာ လိုက်ရှာကြီး ချေမှုန်းကြပါ​တော့တယ်။ အပုန်း​ကောင်းတဲ့ ဆီဇာ​ကြောင့် စစ်တပ်ကဘယ်လိုမှ ဆီဇာတို့​​နေရာကို ရှာလို့မ​တွေ့ကြပါဘူး။ တစ်​နေ့ကြ​တော့ ဆီဇာရဲ့မိန်းမနဲ့ က​လေးနဲ့အသတ်ခံရအပြီးမှာ​တော့ ဆီဇာတစ်​ယောက် လက်စား​ချေချင်စိတ်အပြည့်နဲ့ သူ့မိသားစုကို ​နေရာသစ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်ပြီး လက်စား​ချေဖို့ လူသား​တွေဆီကိုပြန်အသွားမှာ​တော့…. ဒီကားက​တော့ Planet of the Apes Reboot Film Series ရဲ့ လက်ရှိ​မှာ ​နောက်ဆုံးကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားက​တော့ IMDb မှာ 7.4 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 94% ​တောင်ရထားတဲ့ ကား​​ကောင်း​လေးဖြစ်လို့ ကျွန်​တော်​တောင် ကြည့်​နေရင်းနဲ့ပဲ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး မ​စောင့်နိုင်လို့​ကျော်​ကျော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းက အတွဲလိုက်ဆို​တော့ ဇာတ်လမ်းအ​ကြောင်း သိပ်မ​ပြော​တော့ဘူး Spoil သလို ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှု​ပေးကြပါ။
Start-Up ဆိုတဲ့ စကားလေးက ယနေခေတ် လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာပါတယ်…လူငယ်တော်တော်များများက သူတိုက အလုပ်တွေကနေ ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွေ start-up လုပ်ကြပါတယ် ။အဲ့ထဲမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျရှုံးပြီး ၈ ရာခိုင်နှုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ရပါတယ် ၂ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကသာ အောင်မြင်ကြတာပါ လူငယ်အချို့ဟာ အောင်မြင်မယ့် ၂ ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ သူတို့တွေပါမယ်လို့ အတိကျ မပြောနိုင်ပေမယ့်လည်း ဒီလိုစွန့်စားမှုမျိုးတွေကို လုပ်ကြပါတယ်…ဒီတစ်ခါတော့ အဲ့လိုစွန့်စားပြီး start-up လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Movie လေးတစ်ခုကို CM fan တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ———————- Bom ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ start-up ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ပြိုင်လေ့ရှိပါတယ် ၊ ပြိုင်ပွဲမှာ အခြားအဖွဲ့က အနိုင်ရသွားပြီး သူတို့ရဲ့ App ကို ရွေးချယ်မခံခဲ့ရတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေခဲ့ပါတယ် June ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း Bom လိုပဲ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်ပါပဲ သူမအဖွဲ့ရဲ့ App ကလည်း ရွေးချယ် မခံခဲ့ရပါဘူး ။ပြိုင်ပွဲတွေမှာ သူတို့ ၂ယောက်က ခဏခဏ ဆုံဖူးတာကြောင့် အချင်းချင်းမှတ်မိနေကြပါတယ် ပြိုင်ပွဲအပြီး သူတို့ကြိုက်တဲ့ အ္နိ္ဒိယစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ထပ်ဆုံတော့ အတူထိုင်ရင်း စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ် ။အဲ့ကအပြန်မှာပဲ ၂ ယောက်လုံးက နောက်ထပ် APP အသစ်တစ်ခုထွင်ဖို့ အကြံဉာဏ်ရသွားခဲ့ကြတယ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အတွေးတွေက သွားတူနေတဲ့အခါ ဆင်တူရိုးမှား APP လေး ၂ ခုက အချိန်သိပ်မခြားပဲ APP STORE မှာ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်…တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် copy ကူးတယ်လို့ အထင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့ သူတို့ ဘယ်လိုတွေ အငြင်းပွားကြမလဲ ?App အတွက် ထောက်ပံ့ငွေရဖို့ အချင်းချင်း ဘယ်လိုတွေ ယဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မလဲ ?နောက်ဆုံးမှာကော ဘယ်သူက အနိုင်ရမှာလဲ ?အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရင်းကပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်…။
Assassination of Jesse James By the Coward Robert Ford (2007)IMDB Rating……. 7.5ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ဆိုတဲ့ ရာဇဝင်လူဆိုးကြီးကို သေချာမသိကြရင်တောင် အရှောင်အတိမ်း ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတော့ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနာမည်တွင်ရလောက်အောင်လည်းညဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ကို ဖမ်းမယ့်အစား ငါးရှဉ့်ကို လက်ချောဆီသုတ်ပြီး ဖမ်းရတာကမှ လွယ်ပါဦးမယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်းဟာ ဆုကြေးအမြင့်ဆုံး ရာဇဝင်လူဆိုးဖြစ်လာတာပါပဲ။နာမည်တူ စာအုပ်ကိုပဲရိုက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာ သူ့ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူနဲ့ သူနဲ့ကြားက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ နာမည်မှာတင် ဘာအကြောင်းဆိုတာ ဂဃနဏကြီးသိအောင် ပြပြီးသားပါ။ Brad Pittရဲ့ Plan B Entertainmentကာထုတ်လုပ်ထားပြီး မထီတထီဇာတ်ရုပ်တွေမှာာသိပ်လိုက်တဲ့ Brad Pitt ကပဲညဂျက်ဆီဂျိမ်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အိမ်အနားစွန်းမှာ ရွေ့မျောနေတဲ့ မှောင်ရီပျိုးစကောင်းကင်အောက်က တိမ်‌‌တွေ။ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ ရထားလမ်းဆီ ဟိုးအဝေးကခုတ်မောင်းလာတဲ့ ကျောက်မီးသွေးသုံး မီးရထားတစ်စင်း။ ဓားပြတိုက်ဖို့ ရထားသံလမ်းပေါ်ထွက်ရပ်နေတဲ့ ကျောက်မီးသွေး‌ငွေ့တွေကြားက ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ် သူ့ကို ထိုးထားတဲ့ ရထားရှေ့မီး။ ရောဘတ်ဖို့ဒ်ရဲ့ သေနတ်ပြောင်းကို ကျောခိုင်းထားတဲ့ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ရဲ့ ‌ပန်းချီကားရှေ့က နောက်ဆုံးထွက်သက်။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ Cinematographyတွေအားလုံးက ဒီ၂နာရီခွဲကြာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို တစ်ကွက်မှ ငြီးမသွားစေလောက်အောင် လှပပါတယ်။အသက်ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှာ ရာဇဝတ်သားစဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ဟာ လူ၁၇ယောက်ကို သတ်ခဲ့ဖူးပြီး သူ့အတွက် လူသတ်ရတာဟာ ပဲကြီးလှော်ဝါးရသလိုလွယ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထီမထင်စိတ်နဲ့ ရက်စက်မှုကြောင့် သူ့အစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကတောင် သူ့ကိုကြည့်မရပါဘူး။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနှစ်ခုရှိပြီး သူရဲ့ လက်ခလယ်လက်ဆစ်ကပြတ်နေပါပြီ။ ခဲမှန်ဖူးတဲ့စာသူငယ်ကလေး ဂျက်ဆီဂျိမ်းဟာ အတော်သတိကြီးပါတယ်။ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်အနောက်ကို ဘယ်သူမှတိတ်တိတ်လေး ရောက်လာလို့မရတဲ့အထိ အကင်းပါးသလို သူ့ခါးက သေနတ်အိမ်ကို လုံးဝမချွတ်တဲ့လူ။ ရေချိုးလို့သေနတ်အိမ်ခဏချွတ်ရရင်တောင် သေနတ်ကို ဘေးမှာထားတဲ့လူမျိုးပါ။အဲ့ဒီခေတ်က အမေရိကန်အစိုးအရရဲ့ ရာဇဝတ်သားတွေကို ရှင်းတဲ့နည်းကတော့ ဆုငွေထုတ်ပြီး ရာဇဝတ်သားအချင်းချင်း သတ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပါပဲ။ ဘယ်သူမှ သတ်မရဘဲ ဓားပြမှုများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်အတွက် ဆုငွေကလည်း ကြီးပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ ဂျက်ဆီရဲ့ သတိကလည်းကြီးပါတယ်။ သူ့ကို သစ္စာဖောက်ဖို့ တွေးမိရုံနဲ့တင် အဲ့ဒီလူ သေပါပြီ။ဒီလိုသတိကြီးတဲ့ ဂျက်ဆီဂျိမ်းကိုဖမ်းဖို့ အစိုးအရဟာ ဂျိမ်းစ်အဖွဲ့ကလူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ဆုတော်ငွေ မက်လုံးပေးပြီး ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ကို သတ်ခဲ့တဲ့လူကတော့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ရောဘတ် ဖို့ဒ်ပါ။ ရောဘတ်ဖို့ဒ်ဟာ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ကို လုပ်ကြံဖို့ အကြိမ်၈၀၀ကျော် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ဟာ သက်လတ်ပိုင်း ရောက်နေပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ရှိနေပါပြီ။ တစ်နေကုန်လှုပ်ကုလားတစ်လုံးမှာ ထိုင်ရင်း ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ပြာချရင်း သူ့အတိတ်က အမှားတွေကို နောင်‌တရနေပါပြီ။ နောက်ဆုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြံတုန်းမှာ သူ့သမီးလေးရဲ့ အသံကလေးကြောင့်သေနတ်အိမ်ကိုချွတ်ပြီး သူဖို့ဒ်ညီနောင်ကိုကျောခိုင်းရင်း ပန်းချီကားကို ဖုန်သုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ ကားချပ်အပေါ်အုပ်ထားတဲ့ မှန်သားမှာ သူ့ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ ရောဘတ်ဖို့ဒ်ကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းပါပဲ။ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ဟာ လူဆိုးဓားပြသက်သက်ပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းတတ်တဲ့ သူရဲ့ စာနာစိတ်ကလေးကြောင့် သူ့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကြောင့် သူရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုကြောင့် သူ့ကို လူထုက လေးစားကြပါတယ်။ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ရဲ့ အလောင်းဓာတ်ပုံကိုတင် လူပေါင်းများစွာ အလုအယက်ဝယ်ကြပြီး သူ့အလောင်းကို ရေခဲရိုက်ပြီး တလေးတစားထားခဲ့ကြပါတယ်။ ရောဘတ်ဖို့ဒ်ရဲ့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ လုပ်ကြံမှုကပဲ ဂျက်ဆီဂျိမ်းစ်ရဲ့ ဘုန်းရွှေရောင်ကို ပိုတောက်ပစေခဲ့တယ်ပဲ ထင်ပါရဲ့။
“လောကမှာ ဆင်းရဲမှု့ထက် ကြီးမားတယ့် ကျိန်စာ မရှိဘူး့့့ဆာလောင်မှု့ထက် ဆိုးရွားတယ့်ဝေဒနာ မရှိတော့ဘူး” ငယ်စဉ်က ငတ်ပြတ်ပြီး မိခင်ကြီးသေဆုံးမှု့ကို ခံစားလိုက်ရတယ့် ကောင်လေးတယောက့့် မိဘမဲ့ဘဝမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ရတာ ဒုစရိုက်သမားတယောက့့် အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုတာမသိ တရားမှု့ မတရားမှု့ဆိုတာ မသိပဲ လောဘရဲ့ လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီး ဒုဇရိုက်သမားတယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တရားဥပဒေကို ရှောင်ပြေးရင်း သူ့ဘဝမှာ တွယ်တာစရာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဆုံတွေခဲ့တယ်။ အတိတ်ကို ခဝါချပြီး ဘဝအသစ်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားလာတယ့် အချိန်မှာတော့့ သူ့အတိတ်က သူ့ကို ခွင့်ပြုလေပါ့မလား့့ ဘော်လီဝုဒ်ရဲ့ နမည်ကြီးမင်းသား အက်ရှေးကူမားရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတကားကိုပြပါဆိုရင် jaanwar ကိုလည်းပြရပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်အနှစ်ကို မှကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတယ့် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သိပ်မညွှန်းတော့ဘူး ဒေါင်းသာကြည့်လိုက်ပေတော့့
(#စာဖိုင် အခက်အခဲကြောင့် သီချင်းတွေနဲ့ တခန်းနှစ်ခန်းလောက် စာတန်းထိုးလိုအပ်သွားတာကို ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)
IMDb Rating (7.6/10) ရရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်မဖြစ်တဲ့ နေ့ ရယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ အနည်း ဆုံးတော့ သေနတ် မှန်ပြီး ကျည်ဆန် ကြောင့် မသေတဲ့သူရယ်လို့ မရှိဘူး တဲ့။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေရာရာ မှာ သေကြေနေကြ ရစမြဲပဲတဲ့။ လူတွေရဲ့ အတုံ့အလှည့် တွေ က မြန်ဆန် လွန်းတယ် ။ လောဘ ရမ္မက်တွေ၊ အတ္တ မာန်မာနတွေက ကြီးမားလွန်းတယ်။
အဲဒီလို အရာတွေကို စဉ်းစား ရင်း ဒါရိုက်တာ Andrew Nicol ရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကားကို ကြည့်လိုက် ရပြန်ပါတယ်။ မိမိချမ်း သာ ကြွယ်ဝဖို့အတွက် လက်နက် အရောင်းအဝယ် လုပ်မိရာက တရား မဝင် ဒုစရိုက် စီးပွားရေး အစွန်း ရောက်သူ အဖြစ်နဲ့ ရုန်း မထွက်နိုင် တော့ဘဲ မိသားစုတွေ ပြိုကွဲပျက်စီး ရတဲ့ လက်နက်ကုန်သည် “ယူရီ”ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက် ကူး တင်ပြ ထားပါတယ်။ ကိုယ်စား သရုပ်ဆောင်တဲ့ သူကတော့ ဟော လီးဝုဒ်ရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသား “နစ် ကို လာ့စ်ကေ့ချ်” Nicolas Cage ပါ။
မြေပေါ်မှာ ရွှေဝါရောင် ကော် ဇောကြီး ဖြန့်ခင်းထားသလား ထင်ရ လောက်အောင် ကျည်ဆန်ခွံတွေက ရှူမျှော် မဆုံး။ အဲဒီ အပေါ် မှာ ကျော ပေးပြီး ရပ်နေတဲ့သူက ဖြည်းဖြည်းချင်း လှည့်လာပြီး ဒီစကားကို ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သေနတ်ပေါင်း သန်း ၅၅ဝကျော် ရှိတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ လက်နက်တွေ တင်ပို့တယ်။ ခန့်မှန်း ခြေပျမ်းမျှ အနေနဲ့ လူ ၁၂ယောက်မှာ သေနတ်(၁) လက်နှုန်း ဖြစ် တယ်။ ပြဿနာက ဘယ်လို လုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၁၁ယောက်လုံး ကို သေနတ် တစ်လက် နှုန်းပြည့်စုံ သွားအောင် ဘယ်လို ရောင်းရမလဲ ဆိုပြီး ကျုပ် စဉ်းစားနေ တာဖြစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကား နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို စတင်ပါတယ်။
ပြီးတာ နဲ့ အဲဒီမှာ လက်နက် စက်ရုံကြီးက ကျည်ဆန်တွေ ထုတ်လုပ်နေတာ ကို ပြသပါတယ်။ သူ့နာမည် အပြည့်အစုံ က “ယူရီအောလောဗ်” တဲ့။ သူဟာ ရင်ထဲကနေ စကားတွေပြော နေပါတယ်။ ကြောင့်ကြမှု မရှိသလိုပါ ပဲ။ “လောကကြီးရယ် စိတ်မပူပါနဲ့။ ငါ အမှန် အတိုင်း ပြောပါမယ်။ လိမ် ညာမှုတွေ နဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် မတည် ဆောက်နိုင်ဘူး”တဲ့။
တစ်နေ့မှာ ယူရီဟာ ဖခင်နဲ့ အတူ ဘုရားကျောင်းကို လိုက်သွား တယ်။ ဘုရားသခင် နဲ့ နီးစပ်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ သူ့အတွေးထဲက အစ တစ်ခု ကို ဆွဲထုတ်ချင်လို့ပါတဲ့။ ဖခင်က ဘုရားကျောင်းမှာ လူတစ် ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒီကစပြီး ဘုရားကျောင်း မှာ ပထမ ဆုံး သိကျွမ်းရတဲ “အီလီ” ဆိုတဲ့ အဘိုး ကြီးနဲ့ အစ္စရေး လုပ်သေနတ်ကစပြီး အရောင်း အဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူ့ရင်ထဲ မှာတွေးတယ်။ ခိုက် ရန်ဖြစ်ပွားမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင် မှဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီလို ခိုက်ရန် ဖြစ်ရမယ့် လူတွေ နဲ့ပဲ အလုပ် လုပ်ရပြန်တယ်။ ဒါလည်း သူ့ရဲ့ ဗီဇကြောင့်ပါပဲတဲ့။ သူဟာမြို့ ပေါ်က ဂိုဏ်းတွေကို ရောင်းချပေး ရတာမျိုးနဲ့တင် မကျေနပ်နိုင် ဘူးဖြစ် တယ်။ လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုကို ဇောက် ချလုပ်ချင်လာတယ်။ လက်နက်တွေ တောင်လို ပုံနေတဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တ ရက်တိုက်စရာ လူ မရှိတော့ဘူး။
အမေရိကန် တပ်တွေ ဆုတ်ခွာ သွားကြတော့ လက်နက်တွေ သယ် မသွားကြဘူး။ တောင်လို ပုံပြီး ကျန် နေခဲ့တယ်။ သယ်ယူခက အသစ် ဝယ်ယူတာထက် ပိုပြီး ကုန်ကျစရိတ် များလို့ ယူရီက အဲဒီတောင်လို ပုံနေ တဲ့ သေနတ်တွေကို ငွေဖော်ဖို့ ကြိုး စားတယ်။ ဘယ် တပ်ကိုမဆို သူလက် နက်ရောင်းတယ်။ အစ္စရေးလုပ် သေနတ်တွေကို မွတ်စလင်တွေဆီ ရောင်းတယ်။ ကွန်မြူနစ် လုပ်သေနတ် တွေကို ဖက်ဆစ်တွေ ဆီရောင်းတယ်။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး “ဂျက်” ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သူ့ထက် လျင်ပြီး ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လုပ်နိုင် တဲ့ ယူရီကို သိသိကြီး နဲ့ ဖမ်းလို့ မမိ နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒေါသတွေ ထွက်နေတယ်။ အရေးကြုံ လာရင် ယူရီက သင်္ဘောကို နာမည်ပြောင်း လိုက်တာတွေ၊ အလံပြောင်းလိုက် တာတွေနဲ့ လှည့်စားပစ် လိုက်တယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမဆို လက်နက် ရောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် “ဘင်လာဒင်” ကိုတော့ မရောင်းဘူး။ ကိုယ်ကျင့် တရားကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ ချေးများ လွန်းလို့ပါတဲ့။ တစ်နေ့မှာတော့ လစ်ဗျားနိုင်ငံ မှာ လက်နက်တွေ ရောင်းချရင်း၊ လက်နက် ဝယ်သူကပဲ ယူရီရောင်းတဲ့ လက်နက် နဲ့ ညီဖြစ် သူ ဗိုက်တလီ ကို သတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မှန်ကို သိတော့ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ မိန်းမ နဲ့ ကလေးက ဝေးရာကို စွန့်သွားကြ သလို၊ မိဘတွေ ကလည်း သူ နဲ့ဝေး ရာကို ထွက်သွား ကြပြီ။ ဗိုက်တလီရဲ့ အလောင်းကို ခွဲစိတ်တော့ ရရှိတဲ့ ကျည်ဆန်ခွံကြောင့် ယူရီ တစ်ယောက် အချုပ်ခန်း အတွင်းကို ရောက်လာခဲ့ ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ရဲမှူးဂျက်ကို သူက ဒီလိုပြောပါတယ်။ “ငါက မကောင်း ဆိုးဝါးတွေ နဲ့ ပေါင်းတဲ့ကောင်၊ ကမ္ဘာကြီး အတွက် ပျက်စီး သွားတဲ့အရာ အားလုံး အတွက် ငါ့မှာ တာဝန် ရှိတယ်။ ငါက လူသား ချင်းသတ်ဖြတ် စေတဲ့နှောင်ကြိုးကို ကိုင်တဲ့သူ။ ငါ ဘယ်လို အခြေအနေ ဆိုတာ ငါကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတရားရုံးကို ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာဂျက် ဒီအမှုကို ပေါ်အောင် လုပ်နိုင် လို့ မင်းထက် ရာထူးမြင့်တဲ့သူ က မင်းကို ချီးကျူး စကားပြော လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ မင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် ပိုပြီး အေးချမ်း သွားပြီ လို့ ပြောလိမ့်မယ်။ မင်းကို ဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်မယ်။ ရာထူး တိုးပေးမယ်။ ပြီးတော့ ငါ့ကို လွှတ်လိုက်ပြီ လို့ ပြောလိမ့်မယ်။ မင်းက ဒါက မဖြစ် သင့်ဘူးလို့ ငြင်းဆန်လိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါကတော့ လွတ်သွား မှာပဲ။
“ငါ့ကို လွှတ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက မင်းငါ့ကို အပြစ် ရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ငါဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အာဏာ ရှင် တွေနဲ့ ပခုံးဖက် ပေါင်းခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အထဲက ငါတို့ရဲ့ ရန်သူတွေရဲ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ မင်းတို့ရဲ့ သူဌေး ကမှ တကယ့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး လက်နက်ကုန်ကူးတဲ့ သူပါ။ အမေရိ ကန်သမ္မတကြီးပေါ့ကွာ”
“သူ(၁)ရက်ကူးတဲ့ လက်နက် တွေက င့ါရဲ့ (၁)နှစ်စာ ထက်ပိုများတယ်။ တစ်ခါတလေ သေနတ်တွေ ပေါ်မှာ သူ့လက်ဗွေရာ ပါသွား ရင် ဖြေရှင်းရ ခက်မယ်လေ။ အဲဒီလိုဖြစ် မှာစိုးလို့ ငါ့လို ကုန်ကူးတဲ့ လူရဲ့ အကူအညီ ယူပြီး သူမပို့နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ တွေကို ရောက်အောင် ငါက ပို့ပေးရ တယ်။ ဒါကြောင့် ငါက မရှိရင် မဖြစ် တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်ပါ”
သူပြောတဲ့ အတိုင်း ယူရီဟာ တကယ်လည်း လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်နက် ကုန်သည် အလုပ်ကိုပဲ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ကျည်ဆန် ခွံတွေပေါ်မှာ ရပ်ပြီး သူက ပြောပါ တယ်။ “ဘယ်သူက ကမ္ဘာကို ချုပ် ကိုင်နေတာလဲ သိလား၊ လက်နက် ကုန်သည် တွေပေါ့။ လူတွေ အားလုံး စစ်ပွဲကြားမှာ သေသွားနိုင်တယ်။ အသက်ရှင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် ကို ပြော ပြပါ့မယ်။ စစ်နဲ့မပတ်သက်နဲ့”တဲ့။
Cold Warကိုကြည့်ပြီးနောက် တွေးမိတာက
ကျောင်းသင်ရိုးက မြန်မာကဗျာတွေရဲ့ အ‌ရေးပါပုံကိုပါပဲ။
Cold Warဟာ ဂီတသမားတစ်ယောက်က
ဂီတ။ ကျွန‌်တော်တို့ မြန်မာကဗျာမှာသင်ရတဲ့
Cold Warဟာ ဒီတစ်မူထူးတဲ့ဂီတ‌တွေကြောင့်ပဲ
ဗမာလိုပြန်ရေးတာမို့ Lost in Translation
အများကြီးရှိနိုင‌်ပေမယ့် ဒီထဲက သီချင်းတွေကို
Cold Warရဲ့တစ်ချို့ အခန်းတွေဟာ သိပ်လှတယ်။
ဂီတတင်ဆက်မှုရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် နှစ်ယောက်နဲ့
သူတို့ရဲ့ မသက်မသာမျက်နှာတွေပါပဲ။ရုပ်ရှင်နာမည်ကတော့ ဇာတ်အိမ်ကို
တာမို့ Cold Warလို့ပေးထားပေမယ့်။ စစ်နဲ့
Cold Warဟာ 2018ထွက်ဆိုပေမယ့်
ဒါရိုက်တာက သူ့အနုပညာရည်ကို လက်စွမ်းပြချင်တော့
အဖြူအမဲနဲ့ရိုက်ထားတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်က ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံ
ကျေးလက်ဂီတတွေရဲ့ ခံစားမှုမျိုးကိုပဲ Cold War
IMDb Rating ……… 8.2/10
Rotten Tomatoes ……… 83%
((အလန်းစားကားမို့ 1080P5.1CH ပါ လုပ်ပေးထားပါတယ်…))
အရက်စွဲရာမှ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ “ပက်ဒီ” ဆီကို….. နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာသွားပြီး သူ့ကိုစိတ်နာနေခဲ့တဲ့ သားဖြစ်သူ မရိန်းတပ်သားဟောင်း တွန်မီ ရောက်လာပြီးတော့
ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ဆုကြေး အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ “စပါတာ”ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်…
ပက်ဒီ တစ်ယောက် သားဖြစ်သူကို ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေး ပြန်ရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်…
ပက်ဒီ မှာ တွန်မီ လိုပဲ သူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲ စိတ်နာနေတဲ့ ဘရန်ဒန် ဆိုတဲ့….(လက်ဝှေ့သမား ဘ၀မှ အနားယူပြီး ကျောင်းဆရာလုပ်နေတဲ့) အိမ်ထောင်သည် သားတစ်ယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်…
ဘရန်ဒန် ကတော့ ရောဂါသည်သမီးငယ်ရဲ့ ဆေးကုသစရိတ်ကြောင့် သူတို့မိသားစုရဲ့ အိမ်ကို ဘဏ်ကအသိမ်းခံရမဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြုံနေရပြီး အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် “စပါတာ” လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါတော့တယ်…
ဒီလိုဆက်ဆံရေးအဖုအထစ်တွေရှိနေတဲ့ သူတို့သားအဖ သုံးယောက်… “စပါတာ” လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီး ဖြစ်ပျက်ကြမလဲ… ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူက ဘယ်လိုအနိုင်ရသွားမလဲဆိုတာကတော့…
(MMA) ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်ကားတစ်လျှောက်လုံးမှာ အမိုက်စား တိုက်ခိုက်ထိုးသတ်မှုတွေကို အားပါးတရ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်
Masked Ward ( 2020 )
Plot Twist တွေ မြှုပ်ကွတ်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် လာပါပြီ
ကလေးကို ဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ဆရာဝန်ရှုဂို တစ်ယောက် နာလန်ထဆေးရုံမှာ
စီနီယာတစ်ယောက်ကိုယ်စား တာဝန်ချိန်ဆင်းပေးဖို့ ညနေပိုင်းလောက်မှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်
ဆေးရုံကြီးဟာ ယခင်ကစိတ္တဇဆေးရုံဟောင်းကြီးဖြစ်လို့ လှေကားခြေရင်းမှာ
ပိတ်ဖွင့်လို့ရတဲ့ သံတံခါးရယ် အသုံးမပြုဘူးဆိုတဲ့ခွဲစိတ်ခန်းရယ်
ထိုညနေခင်းမှာ လူပြက်မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဓားပြတစ်ယောက်ဟာ
စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဝင်ရောက်လုယက်ပြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို
ထိုသတင်းကိုတီဗီသတင်းမှာကြည့်မိနေစဉ် တာဝန်ကျသူနာပြုက လှမ်းခေါ်၍
တရားခံမှ ဓားစားခံကို အတင်းဒဏ်ရာကြည့်ခိုင်းပြီး
အတင်းအကျပ် ခွဲစိတ်ခန်းကိုဖွင့်ခိုင်းရာမှ မကြာခဏအသုံးပြုထားပုံရပြီး
ကိရိယာအစုံအလင်ရှိတဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းကြီးကို အံ့ဩဖွယ်တွေ့လိုက်ရလို့
ရှုဂိုတစ်ယောက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ
နာလန်ထဆေးရုံကြီးရဲ့ ဖုံကွယ်ထားတဲ့အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို
မ Spoil ချင်လို့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ကြပါနော်
The Last Order ရှုံးနိမ့်သွားပီးနောက်ပိုင်း မလီနီယမ်ဖယ်ကွန်အဖွဲ့တွေဟာ
ခါရှိမှာ ဝူကီတွေအတွက် လိုက်ဖ်ဒေးကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့တပည့် ဖင်းတစ်ယောက် ဂျက်ဒိုင်းမာစတာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့
ရေးဟာ လိုက်ဖ်ဒေးမှာပဲ မိသားစုကို ခွဲခွာပီး ထူးဆန်းတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာ သော့ယူဖို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီသော့ဟာစကိုင်းဝေါ်ကာတို့ရဲ့ Timeline ကြီးတစ်ခုလုံးကို
(သော့ကိုယူရင်း အတိတ်က ဂျက်ဒိုင်းတွေ ဘယ်လိုသင်ကြားပို့ချကြလဲ လေ့လာရာမှ ဂလက်ဆီကြီးကို
အုပ်စိုးချင်တဲ့ Emperor Palapatine နဲ့ ဆုံမိတဲ့အခါ)
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ရေးတစ်ယောက်ကော လိုက်ဖ်ဒေးအမှီ အိမ်ပြန်ရောက်ပါ့မလားဆိုတာ
တရုတ်တန်းက စစ်ပွဲလေးအကြောင်း ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးကို
ဒီကားလေးက အမေရိကားရောက်နေတဲ့ တရုတ်တန်းက တရုတ်တွေ
အမေရိကန်ရဲအဖွဲ့ရဲ့ လျစ်လျူရှုခံရတာတွေ ဂျပန်ရဲ့ အမှောင်ထဲက
တရုတ်လူမျိုးတွေ တစ်နေ့ကိုတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ နှလုံးဖောက်ခံရပြီး
ဒါကို ဉာဏ်ကြီးရှင် မျက်နှာဖြူပလိပ်တွေက နှလုံးစားတဲ့မိစ္ဆာကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုပြီး
အမှုမလိုက်ဘူးတဲ့။ ဒီတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်နဲ့ တရုတ်တန်းက
တရုတ်တွေ ဒီကိစ္စနောက်ကွယ်ကို စုံစမ်းရင်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးပေါ်လာတာပါပဲ